BaCl2 + H2O + K2Cr2O7 → 2HCl + K2Crown4 + BaCrO4
koloriin barium biyaha Kalibaatyamyam; Kaliumotyamyam bichromate; Cusbada Dichromic acid dipotassium koloriin koloriin chromate barium
(digo yara) (lng) (digo yara) (digo yara) (digo yara) (kt)
(trung) (xoog leh) (cam cam) (xoog leh) (ka cam) (mar kale)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta BaCl2 + H2O + K2Cr2O7 → 2HCl + K2Crown4 + BaCrO4
Waa maxay xaaladda falcelinta BaCl2 (barium chloride) waxay la falgashaa H2O (biyaha) waxay la falgalaan K2Cr2O7 (Potassium dichromate; Potassium bichromate; Dichromic acid dipotassium cusbo)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa HCl (hydrogen chloride) iyo K2CrO4 () iyo BaCrO4 (barium chromate)?
BaCl2 wuxuu la falgalaa K2CrO7 xaaladaha qoyaanka
Dhacdada ka dib BaCl2 (barium chloride) waxay la falgashaa H2O (biyaha) waxay la falgalaan K2Cr2O7 (Potassium dichromate; Potassium bichromate; Dichromic acid dipotassium cusbo)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada BaCl2 + H2O + K2Cr2O7 → 2HCl + K2Crown4 + BaCrO4
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee HCl (Potassium dichromate; Potassium bichromate; Dichromic acid dipotassium cusbo)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh HCl (hydrogen chloride) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee K2CrO4 (Potassium dichromate; Potassium bichromate; Dichromic acid dipotassium cusbo)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh K2CrO4 () badeecad ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha badeecada BaCrO4 (barium chromate)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee BaCrO4 (Potassium dichromate; Potassium bichromate; Dichromic acid dipotassium cusbo)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh BaCrO4 (barium chromate) alaab ahaan?
koloriin barium sulfite sodium chloride sodium
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta BaCl2 + Na2SO3 → 2NaCl + BASO3
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada BaCl2 + Na2SO3 → 2NaCl + BASO3
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaCl (sodium sulfite)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaCl (sodium chloride) badeecad ahaan?
What are the chemical and physical characteristic of BaSO3 (sodium sulfite)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh BaSO3 () badeecad ahaan?
2AgNO3 + BaCl2 → 2AgCl + Ba (MAYA3)2
amooniyam qalin koloriin barium koloriin qalin amooniyam
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2AgNO3 + BaCl2 → 2AgCl + Ba (MAYA3)2
How reactions can happened and produce AgCl (silver chloride) and Ba(NO3)2 (barium nitrate) ?
BaCl2 wuxuu la falgalaa AgNO3
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2AgNO3 + BaCl2 → 2AgCl + Ba (MAYA3)2
koloriin barium magnesium sulfate chloride magnesium barium sulfate
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta BaCl2 + MgSO4 → MgCl2 + BASO4
BaCl2 wuxuu la falgalaa MgSO4
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada BaCl2 + MgSO4 → MgCl2 + BASO4
What are the chemical and physical characteristic of MgCl2 (magnesium sulfate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh MgCl2 (magnesium chloride) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee BaSO4 (magnesium sulfate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh BaSO4 (barium sulfate) badeecad ahaan?
koloriin barium kaarboon Sodium kaarboon chloride sodium kaarboon kaarboon
(rnn) (đậm đặc) (rnn) (kt)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta BaCl2 + Na2CO3 → 2NaCl + BaCO3
What is reaction condition of BaCl2 (barium chloride) reacts with Na2CO3 (sodium carbonate) ?
How reactions can happened and produce NaCl (sodium chloride) and BaCO3 (barium carbonate) ?
BaCl2 wuxuu la falgalayaa Na2CO3
Phenomenon after BaCl2 (barium chloride) reacts with Na2CO3 (sodium carbonate)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada BaCl2 + Na2CO3 → 2NaCl + BaCO3
What are the chemical and physical characteristic of BaCO3 (sodium carbonate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh BaCO3 (barium carbonate) alaab ahaan?